LA OGAADAY: M/weyne Farmaajo oo telfoon kula hadlay Hogaamiyaasha kushirsan magaalada Kismaayo, Maxaase lagu heshiiyey? | Www.tusmo.net
LA OGAADAY: M/weyne Farmaajo oo telfoon kula hadlay Hogaamiyaasha kushirsan magaalada Kismaayo, Maxaase lagu heshiiyey?
MUQDISHO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa ogaaday in Madaxweynaha Jamhuuriyada Faderaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xariiro la sameeyey Hogaamiyaasha dawlad gobaleedyada dawladda kushirsan magaalada Kismaayo, oo ay ka wada hadleen sidii si wadajir ah loogu dhaqaaqi lahaa in lays waraysto waxyaabaha ay cabashada kamuujinayaan.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa wacay hogaamiyaashan wuxuuna u cadeeyey in ay dawladdiisu diyaar u tahay wada hadal furan iyo sixitaan wax kasta oo khaldamay, ayna diyaar yihiin sidii ay u dhigi lahaayeen gogosha rasmiga ah ee wada hadalkan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa amaanay isku imaatinka Hogaamiyaashan, oo uu ku sifeeyey mid muujinaya biseyl siyaasadeed, bacdamaa horrey aysan u jiri Karin madal noocan oo kale ah, balse ay ahayd in ay koox kasta aragtideeda si gaar ah warbaahinta ula timaado.
Wararka ayaa sheegaya in ay dawlad gobaleedyadu soo dhaweeyeen ajiibeena dalabka dawladda Faderaalka ee Muqdisho, balse aysan wali isku raacin go’aanka rasmiga ah iyo halka ay wada hadaladan ka dhacayaan.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa u sheegay Madaxweynaha Soomaaliya in marka ay soo saaraan warsaxaafaded ay ku mideysan yihiin,,, ka dib ay iska wareysan doonaan habka loo wajahayo waxyaabaha u baahan in la turxaan bixiyo.
Hogaamiyaasha dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda Faderaalka ee kala ah Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug & HIRSHABEELE ayaa wada hadalo xasaasi ah ku leh magaalada Kismaayo, kaas oo ay qabsadeen markii aad ugu dhaliileen dawladda dhexe in ay duminayso nidaamka Faderaalka ee Soomaaliya.
Soomaaliya ayaa qaadatay hab maamulka Nidaamka Faderaalka, kaas oo dhabaha u xaaraya awoodo ay kala leeyihiin dawladda Faderaalka iyo dawladdaha xubnaha ka ah, waxaana hadda dood ka taagan tahay qaar kamid ah qodobada ay dhinacyadu kala daliishanayaan.